Eden Hazard oo diidi doona inuu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa Chelsea xitaa haddii ay u ogolaan waayaan inuu u dhaqaaqo Real Madrid! – Gool FM
(London) 10 Abriil 2019. Eden Hazard ayaa la soo warinayaa inuu iska diidi doono inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Chelsea ee dalka Ingiriiska.
Xitaa haddii ay Chelsea ku adkeyso Real Madrid, xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa iska diidi doona inuu qandaraaska u kordhiyo Blues.
Heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, Eden Hazard ayaana iska diidi doona inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Chelsea, sidaas waxaa warinaysa Jariiradda The Telegraph.
Real Madrid ayaa aad ugu dhow inay soo qaadato Hazard, laakiin laacibka reer Belgium ayaa isku dayi doona inuu si qasab ah kaga tago kooxdiisa, isagoo ku wargaliyay Chelsea inuu heshiis cusub u saxiixi doonin sida warbixinta lagu sheegay.
Xitaa haddii ay Blues u sheegto inaysan Real Madrid ka iibin doonin isaga, Hazard ayaa iska diidi doona inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Chelsea, waxaana uu ku cadaadinayaa inay ogolaadaan inay iska iibiyaan ka hor inta uusan beeca xorta ah uga tagin sanadka soo socda.